परदेशिएका दाजुभाई सम्झेर रुदैछन्, चेलीहरु
आज : Saturday, December 15, 2018 | २०७५ मङ्सिर २९ शनिबार
क्रान्ति पराजुली - | २०७४ कार्तिक ४ शनिबार
“घरमा चेली रुँदी हुन् मलाई नै सम्झेर
माइतिको जीवन बित्ने भो परदेशी भएर”
गीत बजिरहेको थियो । शब्दहरुले मेरो मन छोए । मैले विदेशिएका लाखौँ नेपाली दाजुभाइलाई सम्झिएँ र सबैको समृद्ध जीवनको कामना गरेँ । आखिर एउटी चेली भनेको दाजुभाइकी शुभचिन्तक न हो ।
नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहार भित्रिदै गर्दा माथि गीतमा भने जस्तै लाखौँ चेलीहरु परदेशिएका दाजुभाइको सम्झनामा रुँदै होलान् । अनि लाखौँ माइतिहरु विदेशमा भक्कानिदै होलान् ।
रोजगारीका लागि विदेशिनै पर्ने नेपाली युवाहरुको वाध्यता छ । के महिला के पुरुष सबैको वाध्यता उस्तै छ । लाखौँ युवाहरुको विदेश पलायनले गाउँघरमा चाडपर्वको महत्व दिनदिनै कम हुदै गएको छ । चाडपर्वले जोगाएर राख्ने मौलिक संस्कार र संस्कृतिहरुमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै भयो ।
जहाँ भए पनि गाउँघरमा रमाइलो गरेका, देउसी भैलो खेलेका सम्झनाका पोकाहरु फुकाएर चिहाउनु हामी नेपालीको नियति भएको छ ।
मेरो वालापनको सम्झनामा गाउँमा युवाहरु जागरुक भएर दसैँतिहार आउनु अगाडि नै गाउँमा लिङ्गे पिङ्ग लगाउने गर्थे । हामी हतारहतार घरका कामहरु सकाएर पिङ्गतिर दौडने गथ्र्यौ । के केटाकेटी के युवा पिङ्गमा सबै झुम्एिको देखिन्थ्यो । यसरी गाउँभरीका सबैको भेट पिङ्गले गराउथ्यो । आपसी सद्भाव र मेलमिलाप बढ्थ्यो । तर हिजोआज यस्ता कार्यहरुमा कमी आएको छ ।
महिनौ अघिदेखि देउसी भैली खेल्ने समूह निर्माण गरिन्थ्यो । देउसी भैलोमा मादल, गितार, च्याब्रुङ्ग जस्ता बाजागाजा बजाइन्थ्यो । मुखैले गाएर नाँच्ने चलन थियो । तिनै चलनले हो, हाम्रा संस्कार संस्कृतिलाई यहाँसम्म ल्याईपुर्याएको ।
अहिले दौरा, सुरुवाल, गुन्यौ चोली आदि पोशाक लगाएर भैली देउसी खेल्ने चलनमा विस्तारै कमी आएको छ । हिजो आज युवाहरु देउसीमा मौलिकपन भन्दा पनि विदेशी संस्कृतिलाई बढवा दिइरहेको देखिन्छ ।
पहिले पिङ्ग र देउसी भैलोहरुमा झुम्मिने युवाहरु आज मोबाइलमा भुम्मिन्छन् र त्यहीँ घण्टौ हराउने गरेका छन् । जसले सामाजिकरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ ।
चाडपर्वहरु पनि विस्तारै समृद्ध परिवारका लागि मात्र सहज बन्दै गएका छन् । निम्न वर्गीय परिवारमा चाडपर्वहरुले अझ पीडा थपेर गएको पाइन्छ । जसरी पनि चाडपर्व मान्नै पर्छ भन्ने मानसिकताले ऋण गरे पनि चाड पर्व मान्ने हाम्रो चलन छ ।
चाड पर्व सबै वर्गका लागि हर्ष र उल्लास बोकेर आए मात्र यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
तिहार बत्तीको चाड, फूलैफूलको चाड, विद्युतीय झलरको लहर नै चलेको । यसले सबै नेपालीको मनमा उज्ज्यालो छर्न सकोस् । हृदयको नातामा पवित्रता थपोस् । सम्बन्धहरुलाई अझ गाढा बनाओस् ।
एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्ने कागले विभिन्न देशहरुबाट मेरा माइतिहरुको शुभ समाचार ल्याइरहोस् ।
सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका दुःख, पीडाहरु ओखर झैँ फुटेर जाउन् । पटका जस्तै धमकेदार बनुन् पलहरु । सबै नेपालीको जीवन स्तर लिङ्गे पिङ्ग झैँ आकासियोस् । यहि छ यो चेलीको २०७४ सालको तिहारको शुभकामना । ।
Address : हनुमान थान, अनामनगर, काठमाडौं
Phone : ०१–२२९९८७६
© 2017 athaiprahar.com. All Rights Reserved. Site by: i-Tech Nepal